गोविन्द बेल्वासेको राष्ट्रवाद : भ्रम कि यथार्थ
गोविन्द बेल्वासे र म धेरै वर्ष अघिदेखि साथी छौं । हामीलाई साहित्यिक, पत्रकारिता र सामाजिक गतिविधिले चिनाएको हो । हाम्रा लेखनका धार अली फरक परे तापनि नेपालमा एउटै भेगको घाम ताप्ने भएर होला हाम्रा कुराहरु मिल्छन् । म पर्यावरणीय लेखनमा कलम चलाउँछु त उनी कानुनी र ईन्टरनेट प्रविधिमा । हामी रचनाहरुलाई साटासाट गरेपछि फोनमार्फत एकअर्काको समालोचना गर्छौं ।
त्यसैमा विश्वास गरेर होला बेल्वासेले आफ्ना विचारहरुको पहाड ‘राष्ट्रवाद : भ्रम कि यथार्थ’ चढेर यसको उचाइ नाप्ने जस्तो गाह्रो जिम्मेवारी मलाई सुम्पिनु भएको छ । उनका यस पहाडरुपी पुस्तकका भञ्ज्याङ र पाखा–पखेरारुपी लेखहरुमा म पहिला नै सयर गरिसकेको हुनाले यस पहाडको आयतन निकाल्न त्यत्ति गाह्रो नलाग्ला जस्तो मैले ठानेको छु ।
बेल्बासे एक कानुनका विद्यार्थी हुन् । उनी अहिले एक बेल्पाली हुन् । अर्थात् म जस्तै बेलायती नेपाली । उनी एनआरएन पनि हुन् । अर्थात् गैरआवासीय नेपाली । उनले बेलायतको नागरिकता अझै लिएका छैनन, लिनलाई योग्य ठहरिएता पनि । यस प्रतिबद्धताले उनको नेपालप्रतिको राष्ट्रवाद दर्सिन्छ । तर उनको यो राष्ट्रवाद भ्रम हो या अथार्थ भनेर ठम्याउन यो पुस्तक अध्ययन गर्नै पर्छ ।
उनी खाडी मुलुकमा गएका लाखौं युवाहरु जस्तो श्रमजीवी होइनन् । यी श्रमजीवी युवाहरु बाध्यताले अन्तत्वगत्वा एकदिन नेपाल फर्कनै पर्छ । अनि तिनलाई सच्चा राष्ट्रवादी भनिन्छ । तर, हजारौं प्रतिभाशाली युवाहरु अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकातिरै हराउँछन् । त्यतैको आइडी, आइएलआर, ग्रिनकार्ड र नागरिकता लिएर ।
तर, यी वर्गका नेपालीलाई अराष्ट्रवादीको बिल्ला भिराइन्छ । बेल्वासे पनि तिनै प्रतिभाशाली गैरआवासीय नेपालीमा पर्छन् । तर, उनलाई यस्तो सौतेनी आमाको सन्तानजस्तै व्यवहार पटक्कै मन परेको छैन । त्यसैले त ‘राष्ट्रवाद : भ्रम कि यथार्थ’ लिएर पाठकसामु आएका छन् । यसअघि ‘रातो पासपोर्ट’ नामक कथासङ्ग्रह पनि प्रकाशन गरेका छन् । एक नेपाली नागरिक भएर विदेसिनु परेको बाध्यतालाई त्यससङ्ग्रहका केही डायस्पोरिक कथाहरुले उजागर गरेका छन् ।
विदेशमा पलायन भएका नेपालीमा झनै बढी राष्ट्रवाद हुन्छ भन्ने बेल्वासेको तर्क छ । उनीहरु पलपल नेपालको बारेमा चिन्ता लिएका हुन्छन् । मनमुटुमा नेपाल आमाको माया च्यापेर राखिरहेका हुन्छन् । तर नीति निर्माताहरु गैरआवासीय नेपालीलाई हेय अनि पूर्वाग्रहीको दृष्टिकोणले हेर्छन् । त्यसैले मलाई के लागेको छ भने गैरआवासीय नेपालीलाई पूर्ण दोहोरो नागरिकता दिनबाट वञ्चित गराइएको विषयप्रति बेल्वासेको चिन्तन नै यस पुस्तकको जन्म हो ।
संघीय संविधान २०७३ ले गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हकको आलङ्कारिक अधिकार दिएको तर राजनैतिक हकबाट वञ्चित गरेको विषयलाई यो कसरी नेपालको समग्र विकासको लागि हितकारी छैन भनी बुँदागत रुपमा केलाएर यस पुस्तकमा राखिदिएको छ । एनआरएन बेलायतमा यसको प्रारम्भिक कालमा आफू बसेर काम गरेको अनुभव बाँड्दै यो दोहोरो नागरिकतालाई अहिलेका पदाधिकारीको स्वीकार्यप्रति लेखक बेखुसी रहेको पनि बुझिन्छ । उनीहरुको स्वीकार्यता नेपाली संविधान र कानुनप्रतिको अज्ञानताले हुनसक्छ । एक नेपाली नागरिकको हक र अधिकारसम्बन्धी संविधान र कानुनमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भनेर तीनका दफादफा पल्टाएर सर्वसाधारणलाई बुझाउने प्रयास लेखकले गरेका छन् । दोहोरो नागरिकताको विषयलाई बन्द, हडताल, भाषण गरेर, वार्ता टोली गठन गरेर र कुनै कूटनीतिज्ञ, पार्टी नेता, मन्त्री वा सांसद सामुन्ने राखेर भन्दा कानुनी रुपमा अगाडि बढ्दा प्रभावकारी हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्घचाउन पुगेका अभियन्ता हुन बेल्वासे ।
पुस्तकमा प्रारम्भ भन्ने छुट्टै एक अंशको साथै अन्य तीन भागमा लेखहरुलाई विभाजित गरिएका छन् । पुस्तकको प्रारम्भिक पृष्ठहरुमा नागरिकताका किसिम तिनलाई कसले र कतिबेला पाउन सक्छ भन्ने कुराको व्याख्या गरिएको छ । नागरिकता, राज्य र राष्ट्रियतालाई परिभाषित गर्दै एक नरहे अर्को रहन नसक्ने सम्भावनाहरु देखाइएको छ । नागरिकता र राज्य ठोस बस्तु हुन भने राष्ट्रियता भावना हो ।
नेपालमा जनजाति तथा अन्य साना जातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिइनु पर्छ । ती वर्गलाई तिनैका मानिसले नेतुत्व गर्न दिइनुपर्छ भन्ने सोंचाइ पनि लेखकको रहेको छ । अर्थात् संघीय संविधान आउनु अगाडि गरिएको जातीय पहिचानसहितको प्रदेशको मागलाई समर्थन गरेको बुझिन्छ । एक जाति र वर्गको चाहनालाई स्वीकार गर्दै समूहगत विकास र फाइदाको लागि अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने विचार लेखकले राखेका छन् ।
हङकङमा बिएनओ पाउने गोर्खा सेनाबाट जन्मेका सन्तानहरु राज्यविहीन हुनसक्ने समस्यालाई पनि यहाँ कोट्याइएको छ । अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको दोहोरो नागरिकता संघीय कानुनमा निहित गर्नेछ ।
उदाहरणको लागि प्रदेश नं. ५ मा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था प्रदेश न ३ को भन्दा भिन्न हुन सक्ने सम्भावना धेरै रहने छ ।
भाग ३ मा मुद्दाको प्रक्रिया, मुद्दा हालेपछिका साथीहरु तथा विज्ञका प्रतिक्रिया र अदालतले दिएको जवाफलाई सम्मिलित गरिएको छ । अनि गोविन्द बेल्वासे अर्थात् लेखक स्वयम् निवेदक बनेर सर्वोच्च अदालतमा चढाइएको मुद्दा ‘नागरिक ऐन २०६३ को दफा १० संविधानसँग बाझिएकोले खारेज गरी पाउँ’
निवेदनलाई यस पुस्तकमा जस्ताको तस्तै उद्धृत गरिएको छ ।
अन्त्यमा, म एक गैरआवासीय नेपाली भएको हैसियतले मुद्दाको नतिजा हाम्रो पक्षमा आओस् भन्दछु । खैर !
मुद्दाको परिणाम जेसुकै आउला, यस पुस्तक एक ऐतिहासिक दस्ताबेज बन्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ । यो कानुनविज्ञ, विद्यार्थी र सर्वसाधारणलाई पठनयोग्य हुने मैले देखेको छु । यसले निश्चय नै सरकारी ओहदामा बसेर नीति निर्माण गर्नेहरुलाई प्रगतिशील र उदार नीति अपनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ । यति चुनौतिपूर्ण कार्यमा हात हाल्नुभएको र दोहोरो नागरिकताजस्तो गहन विषयलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउन यो पुस्तक प्रकाशन गरेर जनजागरण फैलाउन प्रयासरत मेरा मित्र गोविन्द बेल्वासेलाई सफलताको शुभकामना !